Fampiasàna ny Grammarly ho an’ny GV? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Oktobra 2018 10:15 GMT
Misy, mazava ho azy, ireo mpanaramaso ny tsipelina Anglisy amin'ny endrika sy sehatra an-tapitrisany, saingy nitoetra tamiko foana ilay fahatsapana fa tsy tena mpanoratra matanjaka aho noho ny fitsipi-pitenenana. Ary tsy mbola tena nahita fitaovana hahafahako manarina ny fitsipi-pitenenana sy ny fitsipi-panoratana aho, mandra-pahitako ny Grammarly, izay nanandramako ireo dika maimaimpoana sy andoavam-bola.
Atolotra karazana teny Anglisy efatra ianao rehefa misoratra anarana: Amerikana, Britanika, Kanadiana sy Aostraliana. Rehefa avy nisafidy iray amin'izy ireo, sy nanohy ny fanoratanao ianao, ho voasoritra mena ireo olana goavana izay mila amboarinao. Miovaova ireo olana goavana ireo, mety ho faingo diso toerana, fiverimberenana, tsipelina diso sns. Tena ilaina ilay izy amiko rehefa mikarakara ireo Fangatahana Fanontàna aho, rehefa manoratra lahatsoratra ao amin'ny GV, ny mailako, ny asa soratro amin'ny ankapobeny.
5 ora izayAzia Atsimo
7 ora izayEoropa Afovoany & Atsinanana